Akụkọ - Teknụzụ RFID emeela ka ọkwa njikwa nke ụlọ ọrụ ịsa ahụ dịkwuo mma
Teknụzụ RFID emeela ka ọkwa njikwa nke ụlọ ọrụ ịsa ahụ dịkwuo mma
Dị ka anyị niile maara, itinye RFID na ụlọ ọrụ uwe aghọwo ihe a na-ahụkarị, ma nwee ike iweta ọganihu dị ukwuu n'ọtụtụ akụkụ, na-eme ka ọkwa njikwa dijitalụ nke ụlọ ọrụ dum dịkwuo mma. Otú ọ dị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ịsa ahụ, nke dị nso na ụlọ ọrụ uwe, achọpụtawokwa na ntinye nke teknụzụ RFID nwere ike iweta ọtụtụ uru.
Ka ọ dị ugbu a, na ụlọ ọrụ ịsa ahụ, ọrụ nchịkwa data na-ejikarị aka. Ya mere, a naghị enwekarị ihe àmà na-egosi izi ezi nke ngwongwo, nlekota nke ugboro ole linen na-asa, ọnụ ọgụgụ nke ọgwụgwọ nsị dị arọ, na mfu nke linen. Enwere ike ịgbaso ya ma weta ọtụtụ nsogbu na njikwa akwa ákwà.
Tupu ịsacha linen ahụ, ụlọ ọrụ ịsa ahụ kwesịrị ịghọta ọgwụgwọ nhazi dịka agba, udidi, ụdị ojiji na unyi siri dị. Nhazi akwụkwọ ntuziaka na-achọkarị ndị mmadụ 2 ~ 8 ka ha nọrọ ọtụtụ awa iji dozie akwa akwa dị iche iche n'ime chutes dị iche iche, nke na-ewe oge.
Tụkwasị na nke ahụ, otu esi ejikwa ọnwụ na njikọ njikwa ngwa agha, otu esi etinye aka mgbe ọnụ ọgụgụ nke ntinye aka dị ukwuu ma ọ bụ obere; otu esi eleba anya na oke mmetọ oke, nkwuputa, nleba anya nke ndị mba ọzọ, na nhụsianya n'ụzọ na-ezighị ezi n'ime njikọ nsochi linen; otu esi enyocha ọrụ ịsa ahụ, ọnọdụ mmepụta na akwa na njikwa dijitalụ njikọ njikọ nke ahịhịa ahịhịa na nleba anya ogologo oge, ọnụego mgbasa ozi linin, ihe ndekọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na njikwa akwa zombie, wdg bụ ebe niile RFID nwere ike ịrụ ọrụ.
Enwere ike ịsị na teknụzụ RFID ewetala mgbanwe ọhụrụ na ụlọ ọrụ ịsa ahụ. Mkpado ịsa RFID nwere ike inye aka chọpụta oge ịsa ahụ, ịsa ihe chọrọ, ozi ndị ahịa na ịsa ugboro ihe edere, belata ọnụego njehie nke oge ọrụ ntuziaka ọdịnala, ma melite arụmọrụ njikwa nke ukwuu.
Otú ọ dị, na ngwa bara uru, enwekwara ụfọdụ ihe isi ike, gụnyere textiles, label stacking and folding, mmiri mmiri, okpomọkụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-emetụta mmetụta ọgụgụ nke akara. Otú ọ dị, iji merie ihe ịma aka ndị a nke ọma, ndị na-emepụta RFID emepụtala mgbanwe RFID mkpado akwa akwa anaghị akpa, RFID bọtịnụ akwa akwa mkpado, Mkpado akwa akwa silicone na mkpado ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nke kwesịrị ekwesị maka ihe dị iche iche nke linin, okpomọkụ ịsacha, na ụzọ ịsa ahụ.
Enwere ike ịsị na teknụzụ RFID ewetala mgbanwe ọhụrụ na ụlọ ọrụ ịsa ahụ. RFID ịsa akwa mkpado nwere ike inye aka chọpụta oge ịsa ahụ, ihe ịsacha chọrọ, ozi ndị ahịa na ịsa ugboro ole ihe edere, belata ọnụego njehie nke oge ọrụ ntuziaka ọdịnala, ma melite arụmọrụ njikwa.
Otú ọ dị, na ngwa bara uru, enwekwara ụfọdụ ihe isi ike, gụnyere textiles, label stacking and folding, mmiri mmiri, okpomọkụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-emetụta mmetụta ọgụgụ nke akara. Otú ọ dị, iji merie ihe ịma aka ndị ahụ nke ọma, ndị na-emepụta RFID emepụtala mkpado akwa akwa na-adịghị kpara akpa, bọtịnụ akwa akwa, mkpado akwa silicone na mkpado ọtụtụ ihe ndị ọzọ, bụ ndị kwesịrị ekwesị maka ihe dị iche iche nke linen, okpomọkụ ịsacha, na ụzọ ịsa ákwà.
Oge nzipu: Dec-30-2021